Software | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ထီ ဝါသနာရှင်များ အတွက် နံပါတ်ကောင်းကောင်း ရှာပေးမဲ့ BMB Software Lottra 3.6.5.0
BMB Software Lottra 3.6.5.0 | 1.26 MB
ဒီဘလော့လေးမှာ နေ့စဉ် စာဝင်ဖတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က အီးမေးမှ တောင်းထားတာကို လိုအပ်သူများ
လည်း အသုံးပြု နိုင်အောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ထီ ဝါသနာရှင်များ အတွက် နံပါတ်ကောင်းကောင်း ရှာပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ ထီ မထိုးတဲ့သူ ဆိုတော့ မစမ်းကြည့်မိလို့ မသိပါဘူး။
အသုံးပြုချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူပြီး စမ်းကြည့်ကြပေါ့။ ဆုကြီးများ ပေါက်ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်း
Lottra is different. It takes your special date date or an astrological sign that you enter into the Lottra program and uses that date or sign for the most significant part of the seed that starts the number generator. That date can be your birthday, anniversary, wedding, child’s birthday, your lucky date, or any date you want since 1900. If you switch to Lottralogy mode, you can select any one of the 12 (Zodiac) astrological signs. So nowacomputer is still picking your lottery numbers but it knows something about you and you have some control over the computer’s pick.
Home page – http://www.bmbsoftware.com/
ကဏ္ဍ Software, Window
Platinum Hide IP 3.4.0.6 | 2.29 MB
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7(32-bit and 64-bit).
ကဏ္ဍ Hide IP, Software
pc မှာ အချိန်ပေးပြီး Shutdown လုပ်ချင် သူများ အတွက် Power Scheduler for Windows
ဒီနေ့ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1စသည်တို့မှာ အသုံးပြုရန် အတွက်
အချိန်ပေးပြီး Shutdown လုပ်လို့ ရတဲ့ software လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
စတင် အချိန် ၃၀ ပေးထားပါက မီနစ် ၃၀ အတွင်း Shutdown လုပ်ပေး လိုက်ပါမယ် ဒါအပြင် ငှက်ကလေးးများ
တေး ဆိုတေးများနဲ့ လည်း အသုံးပြုလို့ ရတယ်နော်။
Shutdown ပိတ်ရင်တောင် သင်ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းများစွာလည်း ပါရှိသေးတယ်နော် password ပေးထား
ပြီးလည်း အသုံးပြုလို့ ရသေးတယ်နော် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှ တင်ပေး လိုက်တာပါ
ဒါ့အပြင် တခြား ပါရှိသေးသော ပုံစံများကို down ယူပြီးမှ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် လိုက်တော့နော်။
Downloads link ၃ ခုပေးထားပါတယ် သင် နှစ်သက်ရာ link ကနေ down ယူနိုင်ပါသည်။
▼ play store ▼ ▼ appbrain ▼ ▼ 1mobile ▼
Pyae Phyo (MMiTD) by ဦးအာကာ -ဦးလေးကြီး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, November 13, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Software, widget, Window
အသစ်ထွက် ရုပ်ရှင်များကို ကွန်ပျူတာ မိုဘိုင်းဖုန်းများ (Android / iOS) ပေါ်မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဆော့ဝဲ ထွက်ရှိ
အသစ်ထွက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များကို ကွန်ပျူတာ ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ (Android / iOS) ပေါ်မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်
မည့် ဆော့ဝဲ Popcorn Time ထွက်ရှိလာပါပြီ။
ဒီဆော့ဝဲကနေ မိမိ ကြည့်လိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရွေး ၊ Video Quality ရွေးပြီး ကြည့်ရှု ရုံပါပဲ။ စာတန်းထိုး Subtitle
အကောင်းဆုံး Torrent Site တွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ ဆော့ဝဲဖြစ် တာကြောင့် ဇာတ်ကားတွေက အမြဲ update
ကွန်ပျူ တာတွေ အတွက် Popcorn Time ဆော့ဝဲကို ရယူရန်
▼ For Windows ▼ (OR) ▼ For Mac OSX ▼
Android ဖုန်းတွေ အတွက် Popcorn Time App ကိုရယူရန်
▼ popcorntime.apk ▼
iOS Device တွေ အတွက် Popcorn Time App ကိုရယူရန်
Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iDevice တွေ အတွက် Cydia မှာ http://cydia.time4popcorn.eu ဟူသော Source ကို
Add ပြီး ယင်း Source မှ တစ်ဆင့် Popcorn Time App ကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Jailbreak လုပ်မထား
တဲ့ Device တွေ အတွက် Popcorn Time app ကတော့ မကြာခင်ထွက် ရှိလာတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Myanmar Mobile App Store မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Wednesday, October 08, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Software, နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်
Sticky Password 7.0.7.66 Multilingual With Patch Full Version
Sticky Password ဟာ Password တွေ များ စွာနဲ့ အလုပ် လုပ် နေတဲ့ Online အသုံး ပြုသူ တွေ အတွက် သိပ် အသုံး တည့် ပါတယ် များပြား လှတဲ့ Password တွေ ကို ဘယ်လို လုပ် မှတ် မိနိုင် ပါ့ မလဲနှော် ...။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲ က Password အများ ကြီးကို အသုံး ပြုပြီး Site ပေါင်း မျာစွာ ကို Log in ၀င် နေ ရသူ တွေ အတွက် Password တွေ ကို သက် ဆိုင် ရာ Site အ လိုက် အလို အလျောက် မှတ် သား ထားပေး ပါတယ် Firefox တို့ လို Browser တွေမှာ မှတ် ထားမှာ မဟုတ် တဲ့ အတွက် Add - ons တွေ နဲ့ မြှူ ဆွယ် ပြီး Password ခိုး ယူခြင်း ရန်က လည်း ကာ ကွယ် ပြီးသား ဖြစ် မှာပါ.. သုံး ကြည့် လိုက်ပါ.. အဆင်ပြေ ပါတယ်။
added compatibility with the latest Chrome (37)
added compatibility with 64-bit Chrome
added import from Dashlane and Kaspersky Password manager
StickyPassword now uses system proxy settings for the synchronization feature
improved stability of the synchronization in case of network glitches
improved security: it's not possible to retrieve sensitive data from any editbox
fixed Virtual Keyboard if launched from the Caption Button
strengthen default settings of the Password Generator
added Ukraninian language
fixed wrong sorting of national characters.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 02, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Password, Software
iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) Free Download
iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) | 337.49 MB
Downlaod link: iSpring Suite 7.0.0 Build 6130 (x86/x64) ( 337.49 MB )
Salfeld Child Control 2014 14.622 Full Version free Download
Salfeld Child Control 2014 14.622 | 24.23 MB
It isn’t always easy to watch your young ones’ every move on the computer—and it’s even harder to follow what they’re doing on the Internet. Child Control can also help you here, by automatically shutting the door on their Internet connection once their allotted time is used up. Parents can easily regulate how many hoursaday each child can spend on the Internet, and even
Downlaod link: Salfeld Child Control 2014 14.622 ( 24.23 MB )
ကဏ္ဍ Security, Software
SpeedCommander Pro 15.30.7600.1 Datecode 08.07.2014 (x86/x64) Full Version Free Download
SpeedCommander Pro 15.30.7600.1 Datecode 08.07.2014 (x86/x64) | 30.22 MB
SpeedCommander is also available as native 64-bit version for Windows x64. Onlyareal 64-bit file manager can access all files on Windows x64. 32-bit applications are rerouted to “Windows\_SysWow64″ and can’t access the folder “Windows\_System32″.
Home Page: http://www.speedproject.de/enu/
Download Link: SpeedCommander Pro 15.30.7600.1 Datecode 08.07.2014 (x86/x64) ( 30.22 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 10, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Computer, manager, Software
FileCenter Professional 8.0.0.32 Full Version Free Download
FileCenter Professional 8.0.0.32 | 59.94 MB
» Scan to searchable PDF inaclick
» Make files searchable with OCR
» Scan directly toaword processor
» Combine PDFs with drag-and-drop
» Split PDFs without opening them
» Move pages between PDF files
» Convert almost any file to PDF
» Auto-separate & save scans
» Organize files into file cabinets
» Save files directly to FileCenter
» Preview files without opening them
» Find files with full-text search
» Encrypt or securely shred any file
» E-mail files as PDF
» Archive Outlook e-mail to file
» Organize files by Outlook contact
Home Page: http://www.lucion.com
Download Link: FileCenter Professional 8.0.0.32 ( 59.94 MB )
VMWare Fusion 6.X & 5.X Serial Keys are Here !
VMware Fusion isasoftware hypervisor developed by VMware for computers running OS X with Intel processors.
Fusion allows Intel-based Macs to run operating systems such as Microsoft Windows, Linux, NetWare, or Solaris on virtual machines, along with their Mac OS X operating system usingacombination of paravirtualization, hardware virtualization and dynamic recompilation.
for VMWare Fusion 6.X - AA3X8-FPE50-M8EEQ-W4X7V-X6R8F
for VMWare Fusion 5.X - 5Z2KJ-AUK1H-YZ0R0-LR852-1344X
VMware Fusion 5.0.4 (206 MB)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 15, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Computer, Software
AutoRun Pro Enterprise isacomplete rapid application development (RAD) tool to create interactive multimedia applications for Windows - without programming.
You don’t have to beaprogrammer, but with AutoRun Pro Enterprise you’ll feel like one.
Even though it is very easy to learn and use, it has everything you need to develop professional software applications!
Would you like to distribute your product or company presentation, electronic documentation or e-product(s) onaremovable storage device such asaCD, DVD or USB stick?
You can create autorun CD menu now and publish your presentations, documents, files and software,… on portable media such as CDs, DVDs and USB sticks.
Using AutoRun Pro Enterprise you can create an attractive and professional CD menu for your CD or DVD andafront-end menu for your USB stick (USB flash drive).
Name: Longtion AutoRun Pro Enterprise
SoftLab-Portable.com - Portable Soft! by antan
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 15, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Computer, Portable, Software
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သုံး ကွန်ပျူ တာစနစ် (Free Download)
ဓါတ်ဆီဆိုင်သုံး ဆော့ဖ်ဝဲလ် (မြန်မာ + အင်္ဂလိပ်)
New Software Launched !!!
It's Called Maximum Energy !!!
(ဖတ်ရတာ ပျင်းမှာ စိုးလို့ ခပ်တိုတိုပဲ ပြောမယ်နော်)
ဘယ်သူတွေ အတွက်လဲ ???
Medium Pump Station အိမ်သုံး ပန့်ဆိုင် အသေးများနှင့် Large Pump Station ပန့်ဆိုင် အကြီးများ အတွက်
ဆီရောင်း ချရမှု အ၀င်/ အထွက် ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် ဖြစ်တယ် ... ။
Customer က 2000 ဖိုး ၀ယ်လဲ ဖြစ်တယ် ဘယ်နှစ်လီတာနဲ့ ၀ယ်ပါမယ် ဆိုလဲ ဖြစ်တယ် 1 ဂါလံကို ဒသမ
သုံးနေရာ 4.546 လီတာ အထိ အတိ အကျ လိုက် တွက်ပေးတယ် Boxer ကားက ဆီလာ ဖြည့်တဲ့ အခါမှာ
ကိုယ်က လီတာနဲ့ပဲ တွက်ဝယ်ဝယ် ဂါလံနဲ့ပဲ တွက်ဝယ်ဝယ် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။
တစ်နေ့စာ အရောင်း လီတာနဲ့ ငွေတန်ဖိုး သိရမယ် တစ်နေ့စာ ဆီအ၀ယ်နဲ့ ငွေတန်ဖိုး လည်း သိရမယ် ငွေ
လွှဲစာရင်း ပါမယ် ကျန်တာကတော့ သုံးရင်းနဲ့ စမ်းကြည့်ပေါ့နော်။
မြန်မာလို ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဗီဒီယိုလည်း ပါပါတယ် .... ။
**** စက်ထဲ ထည့်သွင်းနည်း ****
အရင်ဆုံး အောက်ဆုံးက လင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ...
ရလာရင် WinRAR စက်ထဲမှာ ရှိတယ်မလား ..
Right click > Extract Here နဲ့ ဖြည်ပြီးတော့
Start Here လို့ ရေးထားတဲ့ နေရာမှာ Double Click နှိပ်ပြီး
ခနစောင့် ပေါ်လာသမျှ အကုန်လုံးကို Next သာ စွတ်နှိပ် ပလိုက်
ပြီးရင် Desktop မှာ Maximum Energy ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် ICON လေး ပေါ်လာ လိမ့်မယ်။
အဆင်မပြေတာ ရှိပါက အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ယခုဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အခမဲ့ စမ်းသပ် သုံးစွဲရန် ဖြစ်သောကြောင့် ဆိုင်နာမည် ပြောင်း၍ မရပါ...။
၀ယ်ယူ သုံးစွဲမည့် သူများ အတွက် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားမှုနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ကြိုဆိုပါသည် ... ။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် ... ။
Mr. Zin Minn Laht
NEW STARS Software Development
ဒီအောက်က လင့်ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပေးပါ ... ။
လက်တွေ့ စမ်းသပ် အသုံးပြုနည်း ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှု လိုပါက အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, June 12, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Desktop, Software
Glary Utilities 4.X PRO + Serial Key
Glarysoft’s Glary Utilities is one of the most consistently popular and most frequently recommended system utilities, and why not?
It bundles some of the most useful Windows-related tools in one free download. It scans and cleans your PC, cleaning temporary files, removing junk files, fixing broken shortcuts, and resolvingawide range of issues, both major and minor, that most Windows users will have no trouble recognizing.
You can run any of its many tools individually, too.
Enter the serial key given below
Click Activate Now [ image ]
Serial Key : 6DDE-BEA7-D7B6-78AA
Downloads: Glary Utilities latest free version setup [11.9 MB]
From: softwares free download latest version by Fun Mujja
ကဏ္ဍ Software, System, Tools
DLL - files FIXER Update free Download
Window System ထဲမှာ .dll ဖိုင်တွေ ပျက်ဆီး သွားခဲ့ရင် ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ။
.dll missing ဖြစ်နေတဲ့ ဖိုင်တွေ ပြန်ရှာဖွေ ပေးနိုင်ပါတယ်..။
အသေးစိတ်ကို http://www.dll-files.com/ မှာသွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
DLL-files.com Fixer Benefits
Optimize your registry with simplicity and ease.
Defrag your Windows® registry with one simple product.
Fix all your DLL file problems at once and maintain an error-free Windows registry.
Stop your applications and PC from crashing.
Prevent the unwanted popups from appearing over and over.
Improve PC performance and operating system response time.
Speed up operating system performance.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 05, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Error Repair, Software
IP Camera Viewer 1.34 Final
မိမိ ကွန်ပြူတာ ကနေ home, office, parking area နောက်ပြီး အခြားသော နေရာတွေမှာ USB or IP
cameras တွေ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ IP camera models ပေါင်း 1500 ကျော်ကို လက်
ခံ ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
control and view ကတော့4ခု ကနေ နောက်ထပ် များစွာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
အနီးအဝေးနဲ့ အလင်းအမှောင် ကိုလည်း ချိန်နိုင်သည့် အပြင် Backup and Restore ကိုလည်း လွယ်ကူ
စွာပြု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Protable လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုရ လွယ်ကူပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဆက်လက် ဖတ်ရှု့ကြပါခင်ဗျာ...။
IP Camera Viewer allows you to view live video from your USB or IP cameras on your PC.
Use any USB or IP camera to keep an eye on your home, office, parking area or anywhere you need security.
View video from multiple IP cameras directly to your computer.
Currently more than 1500 different IP camera models from leading camera manufactures are supported.
It includes Axis, Canon, D-Link, Foscam, Panasonic, Mobotix, Pixord, Sony, Toshiba, Vivotek and many more.
You can sendarequest to our technical team if your camera or model is not listed in our application.
Virtually all USB cameras work with IP Camera Viewer.You can control and view up to4camera feeds simultaneously.
Getalive preview from multiple cameras with this light-weight application.
IP Camera Viewer's centralized camera and layout management allows you to view your cameras from multiple remote locations onasingle screen.
You can change the arrangement and preview layout of the cameras, for your security needs.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 31, 2014 No comments:
Windows Password ဖြတ်ကျော်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
Windows ကို password ပေးပြီး မေ့သွားတဲ့ အခါမျိုးရှိသလို၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်
ဖို့ လိုတာမျိုးလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ Windows password နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဖြေရှင်းနည်း ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
၂။ Ophrcrack အသုံးပြု၍ password ကြည့်ခြင်း
၃။ Software အသုံးပြု၍ password reset ပြုလုပ်ခြင်း
၄။ Windows CD အသုံးပြု၍ password reset ပြုလုပ်ခြင်း
နည်းလမ်းအားလုံးကို ရေးသားဖော်ပြသွားပါမယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းလမ်းထဲက တစ်မျိုး
Windows password မေ့တတ်သူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် Windows တစ်ခါတင်ပြီးရင် တော်ရုံနဲ့ ပြန်မတင်ဖြစ်တော့
ပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကွန်ပြူတာတွေမှာ password တွေ ပေး
ထားပြီး မေ့မှာစိုးရင် ဒီနည်းနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Password reset disk ပြုလုပ်ခြင်း
အဆင့်(၁) – Floppy Disk (သို့မဟုတ်) USB Stick တစ်ခု ကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၂) – Control Panel ကို ဖွင့်ပြီး User Accounts ကို ဆက်သွားပါ။
အဆင့်(၃) – မိမိ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ User Account ကို နှိပ်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း ညာဘက်ဘေး
မှာ “Create password reset disk” နှိပ်ပါ။
အဆင့်(၄) – “Forgotten Password Wizard” ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ “Next” ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့်(၅) – တပ်ဆင်ထားတဲ့ Floppy (သို့) USB drive ကို ရွေးချယ်ပြီး “Next” ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့်(၆) - လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ User account ရဲ့ password ကို text box မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး “Next”
အဆင့်(၇) – prograss 100% ပြည့်ပြီဆိုရင် “Next” နှိပ်၊ Completing Box မှာ “Finish” နှိပ်ပေးပြီးရင်
password reset disk ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
Password reset disk ကို အသုံးပြုခြင်း
ပြုလုပ်ထားတဲ့ password reset disk ကိုတော့ password မေ့သွားတော့မှပဲ ပြန်လည် အသုံးပြုကြမှာ ဖြစ်
ပါတယ်။ အခုမေ့သွားပြီ ဆိုပါစို့။ ပြန်သုံးကြည့်ကြရအောင်။
အဆင့်(၁) - မိမိသုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ သုံးနေကျ user account ကို password မထည့်ပဲ log in ဝင်လိုက်ပါ။
အဆင့်(၂) – password မှားနေကြောင်းပြလာပါလိမ့်မယ်။ “Reset password” မပေါ်ပါက Enter ထပ်နှိပ်
အဆင့်(၃) – Reset password ပေါ်လာရင် အဲဒီစာကြောင်းနေရာကို နှိပ်ပါ။
အဆင့်(၅) - ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Password reset disk (Floppy (သို့) USB Drive) ကို တပ်ဆပ်ပါ။
အဆင့်(၆) – Password Reset Wizard Welcome screen မှာ “Next” နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၇) – password reset disk ပြုလုပ်ထားတဲ့ drive ကို ရွေးချယ်ပြီး “Next” နှိပ်ပါ။
အဆင့်(၈) - ယခုပြောင်းချင်တဲ့ password ကို နှစ်ခါပြန်ရိုက်ထည့်ပေးပြီး “Next” နှိပ်ပါ။
အဆင့်(၉) – Finish ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ wizard box ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းထားတဲ့ password
အသစ်နဲ့ log in ဝင်နိုင်ပါပြီ။
အားသာချက် = သီးခြား Software အသုံးပြုစရာ မလိုတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါ
အားနည်းချက် = Floopy (သို့မဟုတ်) USB drive တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်
ဒီနည်းကတော့ သုံးထားတဲ့ password ကို ပြန်မြင်ရမှာဖြစ်လို့ အတော်လေးကို အသုံးတည့်ပါတယ်။ တ
ခြားသူရဲ့ ကွန်ပြူတာကို ပိုင်ရှင်မသိအောင် သုံးလို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်တာမို့ အသုံးပြု သူတိုင်း
ဗဟုသုတ ရှိထားရမယ့် နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
Software CD Info…
>>Windows password ကို crack လုပ်ပေးပါတယ်။
>>GUI mode (ပုံမြင်ရပြီး Click နှိပ်နိုင်သော စနစ်) ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည့် Software
>>Free and open source sofrware (GPL)
အဆင့်(၁) - http://ophcrack.sourceforge.net/ မှ Download လုပ်ယူပါ။ (Windows XP နှင့် Vista/
7 ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်)
အဆင့်(၂) - ရရှိလာတဲ့ iso ဖိုင်ကို CD ခွေအလွတ်ဖြင့် burn ပါ။ (Windows7မှာ iso ဖိုင်ကို Double
click နှိပ်ရင် burner box ပေါ်လာပါတယ်၊ ခွေအလွတ် ထည့်ပြီး burn ရုံပါပဲ။)
အဆင့်(၃) – burn ထားပြီးတဲ့ခွေကို password သိလိုတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ထည့်ပြီး restart ချပါ။
အဆင့်(၄) – ၎င်း CD ခွေမှ boot ယူပေးပါ။ (Windows တင်တဲ့အခါ Windows CD က Boot ယူသလို
ပဲ၊ ယခု CD ခွေမှ boot ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Boot Menu ခေါ်ပြီး CD Drive ကို ရွေးပေးခြင်းဖြင့် ယူနိုင်
သလို၊ BIOS ထဲ ဝင်ရောက်ပြီး first boot device ကို CD drive ရွေးပေးချင်းဖြင့်လည်း boot ယူနိုင်ပါ
အဆင့်(၅) - အောက်ပါအတိုင်း menu ပေါ်လာရင် user တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Graphic
mode (Auto mode) ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
အဆင့်(၆) - အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ပြီး table ထဲမှာ user name နဲ့ Password အားလုံးပေါ် တဲ့ အထိ
အဆင့်(၇) - ပေါ်လာတဲ့ username နဲ့ password တွေကို မှတ်ထားပြီး restart ချပါ။
အဆင့်(၈) – CD ကို ထုတ်ထားပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ကွန်ပြူတာဖွင့်ကာ password တောင်းလာတဲ့ user
အတွက် မှတ်ထားတဲ့ password ထည့်ပေးပြီး log in ဝင်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် = အရမ်းလွယ်ကူပြီး Hacking ပြုလုပ်နိုင်သည်အထိ အသုံးဝင်ပါတယ်။
အားနည်းချက် = Software CD အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့အတွက် ခွေမဆောင်ထားရင် ဒုက္ခများ
Password reset လုပ်တဲ့ software များစွာရှိပါတယ်။ အများစုက freeware ပါ။ Ophrcrack လို ကြည့်လို့
ရတဲ့ Software ရှိနေတာ ဘာလို့ reset tool သုံးမှာလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အဲလို CD မျိုး မိမိနှင့် တကွ
အမြဲ ရှိနေဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ လိုတဲ့ အချိန်မှ လိုက်ရှာ ရင်လည်း ကရိကထ များပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ်
သေးပြီး အလွယ်တကူ ရှာလို့ရတဲ့ reset tool တွေ တွင်ကျယ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (tools ပေါင်းများစွာ ရှိ
ပါတယ်။ အရေးကြုံလို့ ဘာသုံး ရမှန်း မသိရင် အင်တာနက် သုံးပြီး windows password breaker,
Windows password remover စသဖြင့် ရေးရှာကြည့်ပါ။ အများကြီး တွေ့တဲ့ အထဲကမှ မိမိနဲ့ အဆင်ပြေ
မယ့် တစ်ခုခုကို ရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်) အခု Windows Password Breaker Professional ဆိုတဲ့ Software
ကို အသုံးပြုပြီး ရေးသားပါမယ်။
windows_password_breaker_professional_trial.exe ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
အဆင့်(၂) – CD/ DVD (သို့မဟုတ်) USB disk တစ်ခုခုကို ထည့်ပြီး ၎င်း software ဖြင့် “burn” ပါ။
အဆင့်(၃) – “Ophrcrack CD” ကို အသုံးပြုခဲ့သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း အသုံးပြုပါ။
အဆင့်(၄) – tools တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အသုံးပြုပုံချင်း ချွတ်စွတ်တော့ မတူကြ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းလမ်း
ချင်းတော့ တူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ reset tools တွေက file size သေးတာနဲ့အညီ အသုံးပြုရမှာကလည်း CLI
(command ရိုက်ထည့်ပြီး အသုံးပြုရမယ့် စနစ်) များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ command သုံးရပေမယ့် အလွတ်ရစ
ရာ မလိုပါဘူး password reset လုပ်ရန် 1 ကို ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ စသဖြင့် ညွှန်ကြားပေးပါတယ်။ စာဖတ်
ပြီး လုပ်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်(၅) – password အသစ် ရိုက်ထည့်ပေးပြီး ကွန်ပြူတာကို restart လုပ်ကာ password အသစ်ဖြင့်
log in ဝင်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် = file size သေးငယ်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အားနည်းချက် = Command Line ဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက် Beginner တွေကို စိတ်ညစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းလိုလို အဆင်သင့် ရှိနေတတ်ကြတာက Windows CD ဖြစ်ပါတယ်။ Software ရှာတာတွေ၊ Burning လုပ်ရတာတွေ USB memory stick ရှာရတာ တွေထက် Windows CD ရှာရတာ ပိုလွယ် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
ဘာမှ လိုက်ရှာ မနေတော့ပဲ Windows CD နဲ့တင် password reset လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းက အများဆုံး အသုံးဝင်
လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (Windows7အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပဲ ဒီနည်းက အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။
တင်ထားတာလည်း Windows7ပဲဖြစ်ပြီး၊ သုံးတဲ့ CD ကလည်း Windows7DVD ဖြစ်ရပါမယ်။ Ultimate,
Home Premium စသဖြင့် version မတူရင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)
အဆင့်(၁) – Windows တင်တဲ့အတိုင်းပဲ Windows CD ထည့်ပြီး၊ CD ကနေ boot ယူပါ။
အဆင့်(၂) – အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာရင် “Repair your computer” ကို နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၃) – “Command Prompt” ကို နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၄) - ပေါ်လာတဲ့ cmd မှာ အောက်ဖော်ပြပါ command ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ (original
sticky key ကို backup လုပ်ထားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်) copy c:\_windows\_system32\_sethc.exe c:
အဆင့်(၅) - အောက်ပါ command ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ (cmd file ကို sticky key အဖြစ် နာ
မည်ပြောင်းပြီး copy ကူးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်)
အဆင့်(၆) – 1 file copied. လို့ ပြလာရင် ကွန်ပြူတာကို restart ချပေးပါ။
အဆင့်(၇) – log on screen ကို ရောက်ရင် Shift key ကို ၅ ခါ နှိပ်ပြီး command prompt ကို ခေါ်ပါ။
အဆင့်(၈) – net user လို့ ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ရင် ရှိနေတဲ့ User name တွေ လာပြပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်(၉) - အဲဒီအထဲက မိမိ password ပြောင်းလိုတဲ့ user name ကို net user နဲ့ * ကြားမှာ ရိုက်ပါ။
(ယခု ပြထားတဲ့ပုံမှာ “Raaz” ဆိုတဲ့ user name ကို သုံးပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ) net user raaz *
အဆင့်(၁၀) – Typeapassword for the user: ဆိုတဲ့ စာတမ်း ပေါ်လာပြီး password အသစ်တောင်းမှာ
ဖြစ်ပါတယ် မိမိပြောင်းလိုတဲ့ password ကိုရေးပြီး Enter နှိပ်ပါ နောက်တစ်ကြိမ် password ထပ်တောင်း
ပါလိမ့်မယ်။ confirm ဖြစ်အောင် ၎င်း password အသစ်ကို နှစ်ကြိမ် ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်(၁၁) – command completed successfully ဆိုပြီး ပြလာရင်တော့ restart ချပြီး password အ
သစ်နဲ့ log in ဝင်ရုံပါပဲ။
အားသာချက် = CD နဲ့ Software မရှာရတဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ် သက်သာပါတယ်။
အားနည်းချက် = အနည်းဆုံးတော့ Windows CD ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ Command မှတ်မိဖို့လည်း လိုပါတယ်။
Any data recovery Home Page
Any data recovery side
From: Internet for Myanmar by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 29, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Password, Recover, Software, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်
Program အားလုံး ကို လျှင်မြန်စွာ ပိတ်ပေးမယ့် CloseAll
သင့် ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုပြီးလို့ ပိတ်တော့မယ် ဆိုရင် run နေတဲ့ applications တွေ အားလုံးကို တစ်
ခု ချင်းစီ လိုက်ပိတ်ရတာ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ အစား click နှစ်ချက်နှိပ်ရုံ ဒါမှ မဟုတ် shortcut key
နှစ်ချက်နှိပ်ရုံ နဲ့ run နေတဲ့ applications တွေ အားလုံးကို ပိတ်ပေးနိုင်တဲ့ CloseAll ဆို တဲ့ application
Windows XP, Windows Vista, Windows7and Windows 8 စတဲ့ OS တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
CloseAll ကို ဒေါင်းပြီးရင် အင်စတော လုပ်ပေးရပါမယ်။ CloseAll ကို run ရင် အသုံးပြုနေတဲ့ programs
တွေ ကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး အားလုံး ကို select လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ Ok ခလုတ် ကို တစ်ချက်
နှိပ်တာနဲ့ programs အားလုံး ကို ပိတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မပိတ်ချင်တဲ့ program တွေရဲ့ checkbox မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
CloseAll ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ taskbar မှာ pin လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
CloseAll အတွက် shortcut key ကို အသုံးပြုချင်ရင်တော့ properties ထဲက shortcut key မှာ သင်ကြိုက်
နှစ်သက်ရာ key အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
CloseAll ကို အောက်က လင့် မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
၅ စက္ကန့် စောင့် စရာ မလိုပါ
အဆင် မပြေတာ ရှိရင် စာလေး ရေးခဲ့ပါ မိတ်ဆွေများ အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေအောင်
အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေး ပါမယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 26, 2014 No comments:
လူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိသော Software လေးတစ်ခု Knowledge Box 1.1 (4MB )
လူတိုင်း လူတိုင်းအတွက် အလွန် တန်ဖိုးရှိသော ကွန်ပျူတာဆော့ဝ်လ်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပြုတာ ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ၊ နည်းပညာလောကတွင် ကျော်ကြားသူများ အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် နှင့် တစ်ခြားအထွေထွေနည်းပညာ ဗဟု
သုတများကို အလွယ်တကူ၊ အချိန်မရွး အင်တာနက်မလိုဘဲ ( Offline ) ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စုစည်းပြီး ဒီဆော့လ်ဝဲ ကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆော့လ်ဝဲ၏ ဗားရှင်းမှာ ၁.၁ ဖြစ်ပြီး ယခင် ၁.၀ ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
ယခုဗားရှင်းအသစ်မှာ အကြောင်းအရာပေါင်း ၂၃၁ ခုပါဝင်ပြီး စာလုံးအရွယ်အစားကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်
ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4.11 MB ရှိလို့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာမှာ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
From: ဘလော့ခရီးသည် by Myanmar IT Helper
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 23, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Software, ဗဟုသုတများ